China ekhaya yomtshato uhombiso emhlophe reed diffuser iglasi ibhotile aromatherapy Supplier kunye yoMvelisi | UKingtone
Umhombiso wasekhaya womtshato onombala weengcango zebhotile ye-aromatherapy
Ibhotile ye-diffuser eyi-80ml. Ibhotile yeglasi evumba ngevumba eyenziwe ngeglasi ekumgangatho ophezulu. Umzi-mveliso usebenzisa itekhnoloji yokuprinta kwesikrini ukuqhubekeka nomphezulu wemveliso kwaye wenze ngokwezifiso i-LOGO. Isetyenziselwa ukugcina iziqholo zangaphakathi, iioyile eziyimfuneko, izinto zokuthambisa, njl njl, kwaye zinokutshatiswa nezinti zeRattan kunye nezinti zefayibha ukusasaza ivumba. Lihombise igumbi ukuze likunike umoya opholileyo kunye nokuphumla.
UMGANGATHO OPHAKAMILEYO sticks thina zizinto zokuhambisa ezisetyenziselwa ukuhambisa izinto eziphambili kunye ne-eco-friendly kwimathiriyeli yethu yengcongolo.Uyunifom ngokobukhulu kunye nokumila, ngokuthe tye nangogudileyo kunentonga yendalo yerattan, akukho zingenasiphelo, zizele imibala entle, Izinti zethu ze-diffuser zikwanendawo yokufunxa amanzi, amandla amakhulu okugcina amanzi.
【UKUSETYENZISWA KULULA UKUSETYENZISWA sticks Izinti zokuhambisa ivumba ziyilelwe kukucofa iioyile ezifanelekileyo ngokufanelekileyo nangokucotha ukusasaza ivumba elijikeleze ikhaya lakho ixesha elide, ungalutshintsha ngokulula uvumba ngokudibanisa / ngokususa i-diffuser ukuze ufumane ukuva kamnandi.
IZIPHUMO EZILUNGILEYO sticks Iintyatyambo ezisasaza iintyatyambo ngaphandle kokusasaza ivumba, zinokuhombisa, Liza kulwenza ikhaya lakho, iofisi yakho ibe ntle ngakumbi!
Ukusetyenziswa kweMizi-mveliso: Umhombiso wasekhaya
Inombolo yomzekelo: XZKTD171114
Ukuprintwa kwesikrini: Ewe
Ubungakanani: Iimfuno ezithile zabaThengi
Isampuli: Qokelela iimpahla
Ubungakanani bephakheji enye: 5.6X5.6X15.8 cm
Uhlobo lwephakheji: I-carton / ipallet esemgangathweni yokuthumela ngaphandle okanye isiko elenziweyo
Okulandelayo: Ibhotile yokuhombisa yeglasi ebaluleke kakhulu kwiBhotile yeRed Reed Diffuser
Ibhotile yeglasi oyile diffuser ...